कोरोनाभाइरसको नाममा ह्याकरहरुले मालवेयरयुक्त ईमेल पठाउँदै, होसियार तपाईँलाई पनि आयो की? - Technology Khabar
» प्रविधि » कोरोनाभाइरसको नाममा ह्याकरहरुले मालवेयरयुक्त ईमेल पठाउँदै, होसियार तपाईँलाई पनि आयो की?
काठमाडौं । चीनबाट शुरु भएर हाल नेपालसहित विश्वभर आतंक फैलाइरहेको कोरोनाभाइरसको नाममा हाल ह्याकरहरुले नक्कली ईमेल पठाइरहेका छन्। यी तस्विरसहितका ईमेलमा ह्याकरहरुले यूजरहरुलाई मालवेयर अट्याच गरिरहेका छन् ।
यि ईमेलहरुलाई ह्याकरहरुले अस्पताल र मेडिकल रिसर्च टिमको रुपमा पठाइरहेका हुन् । यस्ता ईमेलमा कोरोनाभाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने सम्बन्धका कयौँ सुचनाहरु राखिएका छन् । यी फाइलहरुमा पिडिएफ, एमपि ४ वा डक्स जस्ता फाइलहरुपनि रहेका छन् । यस कुराको खुलाशा साइवर सेक्योरिटी फर्म आईबिएमएक्स फोर्स र कास्परस्कीले गरेका हुन ।
आईबिएमएक्स फोर्स र कास्परस्कीले कयौँ युजरहरुलाई ह्याकरहरुबाट केहि ईमेल आएको र त्यसमा मालवेयर अट्याच रहेको पाएका हुन् । यी ईमेलहरु हालमा विकराल रुप लिँदै गरेको कोरोनाभाइरसबाट बच्ने उपायहरुको आडमा पठाइएको हो । यसको साथै यी ईमेलहरुमा कोरोनाभाइरसको अट्याकबाट बच्ने उपायहरुको बारेमा पनि बताइएको छ । सेक्योरिटी फर्मकाअनुसार उनीहरुले हालसम्म यस्तो दश प्रकारको फाइलहरु देखेका छन्।
साइवर सेक्योरिटी फर्मले आउने दिनहरुमा ह्याकरहरुले यस प्रकार ईमेलहरु अरु ठुलो मात्रा पठाउने अनुमान गरेका छन् । यस्तोमा यूजरहरुलाई ईमेलमा अट्याच रहेको फाइल्सलाई डाउनलोड गर्ने कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने छ । यी फाइलहरुको आडमा पठाइएको भाइरसहरुबाट तपाईँको कम्प्युटर सिस्टम र प्राइभेसीको लागी खतरा हुन सक्नेछ ।
कोरोनाभाइरसको पुरा नाम २०१९ नोवेल कोरोनाभाइरस हो । यस भाइरसलाई २०१९–एनसिओभी को नामले पनि चिनिन्छ । यस भाइरसलाई पहिलो पटक चीनको वुहान प्रान्तमा पहिचान गरिएको हो । कोरोनाभाइरस यसअघि कतै नभेटिएकाले यसको अगाडी नोवेल राखिएको हो । एजेन्सी